So CoQ GLUTA အသားဖြူ​ဆေး ဆိုပဲ.. - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home 365 Online Shopping Ads So CoQ GLUTA အသားဖြူ​ဆေး ဆိုပဲ..
So CoQ Glutaသည်​ ဘယ်​​တော့မှ မဖြူ​တော့ဘူးလို့​ထင်​​နေသူများအတွက်​ အာမခံ အသားဖြူ​သောက်​​ဆေး​လေး မြန်​မာနိုင်​ငံ online Shopများတွင်​ ​ရေပန်းအစား​ဆုံးဖြစ်​​သော ​နောက်​ဆုံးထွက်​ရှိလာသည့်​ အသိအမှတ်​ပြု GMP နှင့်​ FDA လက်​မှတ်​ရရှိထားပြီး 100%​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုးမရှိ​ကြောင်း အာမခံချက်​အပြည့်​အဝ ​ပေးထား​သော အသားဖြူ​သောက်​​ဆေး တစ်​မျိုးနှင့်​ မိတ်​ဆက်​​ပေးပါမယ်​..
So CoQ Gluta က အသားအ​ရေကို ဖြူ​စေရုံတစ်​ခုထဲသာမဟုတ်​ဘဲ တစ်လအတွင်း ဝက်​ခြံနှင့်​ အဖုအပိန့်​များ အသားအ​ရည် မညီညာမှုများ အမဲစက်​များ မှဲ့​ခြောက်​ တင်းတိတ်​များ လက်​သည်း​ခြေသည်​များ ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ပါ အ​ထောက်​အကူပြု သက်​သာ​ပျောက်​ကင်း​စေပြီး ပန်းနု​ရောင်​သန်း​သော ဝင်းဝါဆို​ပြေသည့်​ အသားအ​ရေကိုပိုင်​ဆိုင်​​စေမှာဖြစ်​ပါတယ်​..
ညအိပ်ယာဝင် ရေနွေး သို့မဟုတ် ရေအေး နဲ့
အသားအ​ရေလတ်​သူများအတွက်​ တစ်​​နေ့တစ်​လုံး​နေ့စဉ်​​သောက်​သုံးသင့်​ပြီး အသားအ​ရေညိုသူများအတွက်​က​တော့ တစ်​လနှစ်​ဘူးဖြစ်​ပြီး အသားလတ်​သူများအတွက်​က​တော့ တစ်​လတစ်​ဘူး ​သောက်​သင့်​ပါတယ်​ရှင်​ ​ဆေးကိုအမြဲ​နေ့စဉ်​​သောက်​သွားရင်​လဲ အလှတိုးလာမှာဖြစ်​ပြီး အသားအ​ရေအတွက်​ အဟာရဖြည့်​စွက်​စာဖြစ်​လို့ ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်​ ​ဆေးကိုဆက်​လက်​မ​သောက်​​တော့ရင်​လဲ အရင်​​ဆေး​သောက်​ထားတဲ့ အသားအ​ရေအတိုင်း ကျန်​ရှိ​နေမှာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​..
အသားဘယ်လောက်မဲမဲ ၂ လပဲသောက်ကြည့်ပါ .. အတော်လေးဖြူမလာဘူးဆိုရင် ကုန်ကျခဲ့တဲ့ဆေးဖိုး ပြန်လျော်ပေးတဲ့အထိ အာမခံပါတယ်။ ဆေးခန်းမှာ သိန်းနဲ့ချီပေးပြီး ဆေးထိုးတာထက်တောင် ဖြူမြန်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းက ၂၅၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အလုံး ၃၀ ပါပါတယ်..
ဖုန်း - 09451689031( viber) , 09787179972 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်...
ရန်ကုန်မြို့ မန်းလေးမြို့တွင်း ချိုသာသော ပို့ဆောင်ခဖြင့် မှာယူနိုင်ပြီး အိမ်ရောက်မှ ငွေရှင်းစနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
So CoQ Glutaသညျ​ ဘယျ​​တော့မှ မဖွူ​တော့ဘူးလို့​ထငျ​​နသေူမြားအတှကျ​ အာမခံ အသားဖွူ​သောကျ​​ဆေး​လေး မွနျ​မာနိုငျ​ငံ online Shopမြားတှငျ​ ​ရပေနျးအစား​ဆုံးဖွဈ​​သော ​နောကျ​ဆုံးထှကျ​ရှိလာသညျ့​ အသိအမှတျ​ပွု GMP နှငျ့​ FDA လကျ​မှတျ​ရရှိထားပွီး 100%​ဘေးထှကျ​ဆိုးကြိုးမရှိ​ကွောငျး အာမခံခကျြ​အပွညျ့​အဝ ​ပေးထား​သော အသားဖွူ​သောကျ​​ဆေး တဈ​မြိုးနှငျ့​ မိတျ​ဆကျ​​ပေးပါမယျ​..
So CoQ Gluta က အသားအ​ရကေို ဖွူ​စရေုံတဈ​ခုထဲသာမဟုတျ​ဘဲ တဈလအတှငျး ဝကျ​ခွံနှငျ့​ အဖုအပိနျ့​မြား အသားအ​ရညျ မညီညာမှုမြား အမဲစကျ​မြား မှဲ့​ခွောကျ​ တငျးတိတျ​မြား လကျ​သညျး​ခွသေညျ​မြား ကနျြးမာ​ရေးအတှကျ​ပါ အ​ထောကျ​အကူပွု သကျ​သာ​ပြောကျ​ကငျး​စပွေီး ပနျးနု​ရောငျ​သနျး​သော ဝငျးဝါဆို​ပွသေညျ့​ အသားအ​ရကေိုပိုငျ​ဆိုငျ​​စမှောဖွဈ​ပါတယျ​..
ညအိပျယာဝငျ ရနှေေး သို့မဟုတျ ရအေေး နဲ့
အသားအ​ရလေတျ​သူမြားအတှကျ​ တဈ​​နတေ့ဈ​လုံး​နစေ့ဉျ​​သောကျ​သုံးသငျ့​ပွီး အသားအ​ရညေိုသူမြားအတှကျ​က​တော့ တဈ​လနှဈ​ဘူးဖွဈ​ပွီး အသားလတျ​သူမြားအတှကျ​က​တော့ တဈ​လတဈ​ဘူး ​သောကျ​သငျ့​ပါတယျ​ရှငျ​ ​ဆေးကိုအမွဲ​နစေ့ဉျ​​သောကျ​သှားရငျ​လဲ အလှတိုးလာမှာဖွဈ​ပွီး အသားအ​ရအေတှကျ​ အဟာရဖွညျ့​စှကျ​စာဖွဈ​လို့ ဆိုးကြိုးလုံးဝမရှိပါဘူးရှငျ​ ​ဆေးကိုဆကျ​လကျ​မ​သောကျ​​တော့ရငျ​လဲ အရငျ​​ဆေး​သောကျ​ထားတဲ့ အသားအ​ရအေတိုငျး ကနျြ​ရှိ​နမှောပဲ ဖွဈ​ပါတယျ​..
အသားဘယျလောကျမဲမဲ ၂ လပဲသောကျကွညျ့ပါ .. အတျောလေးဖွူမလာဘူးဆိုရငျ ကုနျကခြဲ့တဲ့ဆေးဖိုး ပွနျလြျောပေးတဲ့အထိ အာမခံပါတယျ။ ဆေးခနျးမှာ သိနျးနဲ့ခြီပေးပွီး ဆေးထိုးတာထကျတောငျ ဖွူမွနျပါတယျ။
စြေးနှုနျးက ၂၅၀၀၀ ဖွဈပွီး အလုံး ၃၀ ပါပါတယျ..
ဖုနျး - 09451689031( viber) , 09787179972 ကိုဆကျသှယျဝယျယူနိုငျပါတယျ...
ရနျကုနျမွို့ မနျးလေးမွို့တှငျး ခြိုသာသော ပို့ဆောငျခဖွငျ့ မှာယူနိုငျပွီး အိမျရောကျမှ ငှရှေငျးစနဈဖွငျ့ ပို့ဆောငျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျး ပါးအပျပါသညျ။
နယျမှဝယျယူလိုသူမြားအတှကျ KBZ,CB Bank မှတဆငျ့ ငှကွေိုလှဲစနဈဖွငျ့ မှာယူနိုငျပါသညျ..